60W Ruo na 175W Metal Halide Replacement China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo nke na-eme ka ọkpụkpụ dị mma,175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ,Nkịtị na-agafe
Home > Ngwaahịa > Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ > 175w Metal Ride Replacement > 60W Ruo na 175W Metal Halide Replacement
Ihe Nlereanya.: BB-XHJD-60W
Bbier 60 Watts Metal Halide Dide Replacement E nwere ìhè dị ka 7,800 Lumens na nke a Metal Halide ruo na 30w nwere ike dochie anya 175 watt HPS / HID / HALIDE light.4000K agba aja na-eme ka a hụ ìhè ọkụ. Okpukpo uzo ogugu nke uzo nke 175W anyi bu ndi ozo. Jikọtara ozugbo na E39 Mogul Bases ma gụọ ya na.
Ogwe ọkụ a na-emetụta ọkụ bulbs na- eji LED SMD2835 Technology ma hụ na etinyere ìhè niile maka ịrụ ọrụ ka mma. Ebe e39 anyị nwere na-eduzi ndị mmụọ ozi 120 iji gbasaa ìhè. Nke a retrofit bọlbụ 60w bụ ezigbo maka wụnye na post n'elu fixtures na kanopi fixtures. Anyị 175h mh ada nnọchi a na- achọ maka mma jụrụ na Larger Size, aluminum Heat Sink na ọhụrụ oghere oghere iji hụ ogologo ndụ arụmọrụ.
Ngwongwo nke na-eme ka ọkpụkpụ dị mma 175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ Nkịtị na-agafe Ngwongwo 100 Nke Na-eme Ka Ọkpụkpụ Na-akpụ Ngwongwo nke ntinye maka ọkụ ọkụ Ngwongwo gas na-ere ọkụ 175 ngwongwo nke ọkpụkpọ nke Watt Metal Ihe eji eme ka ọ dị mma